07/12/2017 - Page 3 sur 4 -
Vaksiny polio- Fénérive Atsinanana : Navitrika nitondra ny zanany ireo ray aman-dreny
07/12/2017 admintriatra 0
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly, 6 desambra ary tsy hifarana raha tsy rahampitso 8 desambra ny fanaovana vaksiny fanefitra ny lefakozatra, na ny poliomyélite manerana ny faritra 22, andiany faha-11. Ho an’ny faritra Analanjirofo, distrika …Tohiny
Campus France – Fampianarana ambony : Mpianatra malagasy 4 000 mandrato fianarana any Frantsa
Tsy mitsahatra mitombo ny fangatahana voarain’ny Campus France mahakasika ny fanohizana ny fianarana any Frantsa. Tafakatra 8000 ireo mpitsidika isan-taona ary tamin’ny fahafolo taonany, antontan-taratasy maherin’ny 1 800 no voarainy izay antontan-taratasy betsaka indrindra hatramin’izay …Tohiny
Ambohidratrimo : Tranona karàna norobaina valo lahy
Nisehoana fanafihana teratany karàna teny Soamanandray kaominina Ambohidratrimo. Ny marainan’ny sabotsy 2 desambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 10 ora. Valo lahy tsy misaron-tava no fantatra fa nanatanteraka izany. Tsy tao an-trano izy ireo tamin’io …Tohiny
Ambohitsiroa Ambohidratrimo : Mpivady nidaroka zaza sembana
Nataon’ny fokonolona fitsaram-bahoaka tao Ambohitsiroa Kaominina Ambohidratrimo ny mpivady izay nidaroka zaza sembana. Ny harivan’ny zoma lasa teo no nisehoan’izany. Ny zokiny sy ny vadin’ny zokiny ihany no nahavita nanao izany fikasihan-tanana izany, ka niteraka …Tohiny
Fanampiana mitentina 8.3 tapitrisa Dolara amerikanina no natolotry ny firenena mikambana an’ireo tra-boina manerana ny nosy vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Enawo tamin’ny alalan’ny drafitry ny firenena mikambana na ny SNU izay natolotr’izy ireo omaly teny ...Tohiny